आजको राशिफल - मिति २०७४ साल साउन २२ गते चतुर्दशी तिथि आइतबार
HOME » आजको राशिफल - मिति २०७४ साल साउन २२ गते चतुर्दशी तिथि आइतबार
डिसी नेपाल , २२ श्रावण २०७४
आफ्नो श्रमबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्लान्। अवसरका लागि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। कामको सन्दर्भमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। तापनि मिहिनेत गर्दा पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने अवसर जुट्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। साइनो गाँस्नेहरूले दु:ख दिन सक्छन्, सजग रहनुहोला।
प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। मिहिनेतले विशेष स्थान दिलाउन सक्छ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने दिगो काममा जग बसाउने अवसर जुट्नेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा होला। रुचिका विषयमा लगानी बढाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनाले प्रसिद्धि पनि बढ्नेछ।
कामको चापले जीवनशैली व्यस्त रहनेछ। परिस्थिति अनुकूल रहे पनि सुविधाका लागि खर्च बढ्नेछ। समयमा स्रोतसाधन जुट्नाले सजिलै लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ भने दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ। अतिथिका रूपमा मानसम्मान प्राप्त हुनेछ। तर, बलजफ्ती गर्दा काम बिग्रन सक्छ। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझ्ने चेष्टा गर्नुहोला।
अपेक्षाअनुसार फाइदा नउठ्न सक्छ। अरूको वचन टाल्न नसक्दा दु:ख पाइनेछ र खर्च पनि हुनेछ। परिबन्धले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। अधिकार सुरक्षा गर्न जुट्नुपर्नेछ। गरी आएका काममा सामान्य फाइदा हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू बढ्नाले समस्या थपिएला। तापनि, लगनशीलताले नयाँ अवसर दिलाउन सक्छ। ठगीमा परिने योग भएकाले होसियार रहनुपर्ला।
तत्कालको सामान्य फाइदा हेर्दा पछिलाई घाटा हुन सक्छ। बेसुरमा बोल्ने बानीले दु:ख पाइनेछ। विशेष योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला। काम बिग्रने डरले सताउनेछ। साझेदारीमा समस्या आउनाले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ। कृषि तथा पशु व्यवसायबाट लाभ हुनेछ। आजको श्रमबाट पछिलाई फाइदा पुग्न सक्छ। आमाको सहयोगले काम बनाउन सकिनेछ।
सहयोगीहरूले हात झिक्नाले परिस्थिति आफ्नो पक्षमा नरहन सक्छ। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइनेछ भने काम बिग्रने डरले सताइरहनेछ। सञ्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ। व्यवसायमा अपेक्षित फाइदा नहुन सक्छ। दाजुभाइमा असमझदारी देखापर्न सक्छ। सोखले खर्च गराउने समय भएकाले उठेको आम्दानी सञ्चय गर्न नसकिएला।
बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउन सक्छ। मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक अभिव्यक्तिले ठूलो अवसर दिलाउन सक्छ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम हातपार्ने समय छ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनाले प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। विशेष अवसरले प्रसन्नता दिलाउनेछ भने सहयोगीहरूले काममा उत्साह जगाउनेछन्। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुनेछ। आकर्षक उपहारले उत्साह जगाउनेछ। रोकिएका काम सम्पादन हुने र नयाँ काम पाइने योग छ। पारिवारिक जमघटले आनन्द दिलाउनेछ। मिहिनेतले आत्मविश्वास बढाउनेछ।
केही खर्च भए पनि काममा लगानी बढाउने समय छ। तत्काल उद्देश्य भने पूरा नहुन सक्छ। सोखले खर्च बढाउनेछ। टाढाका साथीभाइसँग सम्पर्क बढ्नेछ। आफन्तजनबाट टाढिनुपर्ला। पतिपत्नीबीच घरसल्लाह नमिल्न सक्छ। तापनि चिताएको काम सम्पादन गर्न सकिनेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिने मौका छ। अनुकूल स्थानान्तरण र टाढाको यात्रा सम्भावना छ।
मिहिनेतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। आँटले काम सम्पादन हुनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। थोरै लगानीबाट पनि नाफा उठाउन सकिनेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। तारिफयोग्य काम सम्पादन गर्दै मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ। फलितज्योतिषाचार्य: उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल, सहयोगी : नेपाली पात्रो
उडिरहेको जहाजभित्रै एक जोडीले सेक्स गरेपछि ...
युएस बंगला विमान दुर्घटनाः पाइलटकी श्रीमती मृत्युसँग जुध्दै
आशिक बनाएर रातारात हिट भएकी यी अभिनेत्री आज किन भइन् गुमनाम
सुरक्षा घेरा तोड्दै हतियारसहित आएकी युवती सलमानको घरमा छिरेपछि...
जुन हिरोइन लागि सलमानकी बहिनीसँग गरे सम्बन्धविच्छेद, उसैले छाडेर गएपछि...
यस्ता छ कालोपना हटाएर अनुहार गोरो र चम्किलो बनाउने १४ अचुक उपाय
सबै सुरक्षा घेरा पार गरेर ग्यालेक्सी अपार्टमेन्ट पुगिन् सलमानकी ‘श्रीमती’!
दक्षिण एसियामा सेवा विस्तार गर्दै ‘बिकिनी एयरलाइन्स’, भारत आइपुग्यो नेपाल कहिले ?
सुपरस्टार महेश बाबुले लिए आन्ध्रप्रदेशको मुख्यमन्त्रीको शपथ ! (भिडियोसहित)
चार तस्वीरमा हेर्नुस् सुन्धारामा भएको आगलागी
गिरिजाप्रसादको तारिफ गर्न एमाले माओवादी शीर्ष नेताको लाइन लाग्यो
मन्त्रिपरिषद बैठक : विभिन्न समिति गठन
आत्मघाती आक्रमणमा २९ को मृत्यु, ५२ जना घाइते
प्रमुख दलका नेताको एउटै स्वर : गिरिजाप्रसादका कारण गणतन्त्र स्थापना
दोस्रो फान अवार्ड २०७३ को मनोनयन सार्वजनिक
बीस वर्ष पुराना ११० सवारी जफत
राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता चैत २१ देखि हुने
विजय गच्छदार भन्छन् - 'म उपसभापति भए नेपाली काँग्रेस बलियो बनाउँछुु'
सरकारी तलब खाएपछि जहाँ पठायो त्यहीँ जानुपर्छ : लालबाबु